महिलाहरु किन पुरुषको वीर्य किनेर आमा बनिरहेका छन् ? यस्तो रहेछ कारण | Rajmarga
महिलाहरु किन पुरुषको वीर्य किनेर आमा बनिरहेका छन् ? यस्तो रहेछ कारण
संसारभर त्यस्ता महिलाको संख्या लगातार बढ्दो छ, जो स्पर्म अर्थात पुरुष वीर्य किनेर आमा बनिरहेका छन् । यस्ता महिलाहरु विवाहसमेत गरिरहेका छैनन्, आइवीएफको सहयोगमा उनीहरु बिना यौन सम्पर्क नै आमा बनिरहेका छन्।
पाली केर पनि त्यस्तै महिलाहरुमध्येकी एक हुन्, जुन कुनै पुरुषको वीर्य किनेर आमा बनेकी हुन् । अक्सफोर्डकी ३९ वर्षीया पालीले एक जना अपरिचित वीर्यदाताको वीर्यबाट गत वर्ष गर्भधारण गरेकी थिइन् । र, यो वर्षको सुरुवातमै उनले सन्तान जन्माइन् । यो प्रक्रियामा वीर्यलाई एउटा प्रयोगशालामा गर्भधान गराइन्छ । आइवीएफ जोडीहरुले पनि अपनाउने गरेका छन्, जो कुनै कारणले आमाबाबु बन्न असमर्थ हुन्छन् ।
पालीले भनिन्–म विल्कुलै तयार थिएँ र मलाई थाहा थियो कि यदि आमा बन्न चाहन्छु भने आइवीएफ नै अपाउनुपर्नेछ । जब म ३६ या ३७ वर्षकी थिएँ तब यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न थालेँ । मैले कहिल्यै यौन सम्पर्क गरिनँ । यस्तोमा यदि म आइवीएफ अपनाउँदिन थिएँ भने म कहिल्यै आमा बन्ने सक्ने थिइनँ ।
उनले भनिन्–म आश्चर्यमा परेकी थिएँ कि मेरो परिवारजनले यो कुरालाई निकै सहजताका साथ स्वीकार गरेको थियो । ब्रिटेन सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सिंगल वुमन बन्ने चलन बढ्दो छ । सन् २०१४ बाट त ब्रिटेनमा यसमा ३५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। अक्सफोर्ड फर्टिलिटीका मेडिकल निर्देशकका अनुसार उनले २० भन्दा बढी एकल महिलाको उपचार गरेका छन् । उनका अनुसार जसैजसै जागरुकता बढेको छ, त्यसरी नै एकल महिलाको चलन बढ्नेछ ।
अक्सफोर्ड फर्टिलिटीका अनुसार मानिसहरु अब एक्लै बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । मानिसहरु या त वीर्य किनिरहेका छन् या अन्डाणु किनिरहेका छन् । भारतमा पनि यो ट्रेन्ड पछिल्लो समय देखिन थालेको छ। गत वर्ष मात्रै अभिनेता करण चौहर र तुषार कपुरले यस्तो गरेका थिए ।यद्यपि आइवीएफ महंगो पर्दछ । ब्रिटेनमा लगभग सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । आइवीएफ सफल हुनेछ वा हुने छैन यो महिलाहरुको अन्डाणुमा निर्भर गर्दछ र साथै वीर्यको गुणस्तरमा पनि । अक्सफोर्ड फर्टिलिटीमा आइवीएफको सफलता दर ३० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत छ ।
अन्डा कसरी लिइन्छ ?
भारतमा पनि वीर्य र अन्डाणु बेच्ने चलन बढ्दो छ। यसका कयौ कारण बताइने गरेको छ । एक त यो कि जुन मानिस ढिला विवाह गरिरहेका छन्, उनीहरुका लागि आमाबाबु बन्नमा निकै समस्या हुने गर्दछ । यस्तोमा आइवीएफ एउटा मात्र सहारा रहन्छ । वीर्यजस्तै अन्डाणु दान गर्न सजिलो हुँदैन । यो निकै जटिल प्रक्रिया हो र यसमा १५ दिन लाग्न सक्दछ ।
भारतीय नियमअनुसार ती महिलाहरुबाट अन्डा लिइन्छ जो आमा बनिसकेका हुन्छन्, ताकि उनीहरुबाट आमा बन्नेमा कुनै समस्या नहोस् । अन्डालाई महिलाको शरीरबाट इन्जेक्सनको माध्यमबाट बाहिर निकालिन्छ । यो अन्डाबाट जुन पुरुषलाई सन्तान जन्माउनु छ, यसको वीर्यसँग मिलाइन्छ ।
वीर्य र अन्डालाई मिलाएर बेबी (एंब्रियो) बनाइन्छ । एंब्रियोलाई त्यो महिलाको गर्भमा राख्नका लागि कुनै सर्जरी गर्नु पर्दैन । बस एउटा लाइन बनाएर महिलाको शरीरमा प्रवेश गराइन्छ । १५ दिनभित्र थाहा हुन्छ कि गर्भ बस्यो कि बसेन । सेरोगेस र डोनरका विषयमा गोपनीयताको सम्झौता हुन्छ ।
भारतमा गत वर्ष मोदी सरकारले एउटा विधेयक पेस गरेको थियो, जसमा अब कुनै एकल महिला अभिभावक बन्न सक्दिनन् । अब सेरोगेसीको माध्यमबाट उनीहरु मात्र अभिभावक बन्न सक्छन् जसले भारतीय कानुन अनुसार विवाह गरेका छन् ।
यो विधेयक अझै संसदीय समितिमा छ । यो विधेयक ड्राफ्ट भएपछि नै एकल अभिभावकलाई आइवीएफ सेन्टरहरु सतर्क भएका छन् । विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भनेकी थिइन् कि यदि कसैलाई सिंगल अभिभावक बन्नु छ भने कुनै बच्चा अपनाउने सुविधा अपनाउन् यो सुविधालाई शौकका रुपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: हिन्दु धर्मका यी ११ परम्परा, जसलाई विज्ञानले पनी प्रमाणित गर्छ
Next post: निर्वाचन क्षेत्र विकासको रकम आफूखुसी खर्च गर्न नपाइने
कामसूत्रका अनुसार महिलाहरु यस्ता पुरुषप्रति हुरुक्कै हुन्छन्
तपाईलाई थाहा छ ? कति होला सफल सेक्सको अवधि ?
नाकको आकारको सम्बन्ध पहिचान र इज्जतसँग होइन हजुर, यसरी मौसमले तय गर्छ
असल केटीहरु किन खराब केटाहरुलाई मन पराउँछन् ? यस्तो रहेछ कारण